Ubuzwe baseMontenegro egumbini lehhotela laseMONTIS MOUNTAIN RESORT
Ubunikazi begumbi lehhotela + ubuzwe baseMontenegro
I-MONTIS MOUNTAIN RESORT yi-Splendid - indawo enezinkanyezi ezinhlanu enamakamelo angama-5 yakhiwa eduze kwentaba esenyakatho yeMontenegro, esifundeni saseKolasin, ngokuxhaswa kohlelo lombuso "Izakhamuzi zaseMontenegro ngokutshalwa kwezimali", iphrojekthi yagunyazwa ngoSepthemba 238.
Ngokuya ngemigomo yohlelo, ukuthengwa kwegumbi (e-suite) eMONTIS MOUNTAIN RESORT nguSplendid ngemali engama- € 250 noma ngaphezulu kwenza kube nokwenzeka ukuthola ubuzwe baseMontenegro (izindleko ezingeziwe) zomtshalizimali uqobo, unkosikazi wakhe nezingane. Kubalulekile ukuthi wazi ukuthi umtshali-zimali akalondolozi esabelweni, kepha usempahla eMONTIS MOUNTAIN RESORT yiSplendid, ethenga igumbi (suite) elithile. Ngaphezu kwalokho, ifenisha ifakiwe entengo.
I-MONTIS MOUNTAIN RESORT yi-Splendid izophathwa yiqembu elidumile le-Splendid, eliqinisekisa ukubuyela ngokushesha ezinombolweni ezinhle zenzuzo. Ngaphezu kwalokho, ehhotela le-SPLENDID 5 * eningizimu yeMontenegro kuzokwazi ukuhlala mahhala isonto elilodwa ngonyaka onyakeni wokuqala ngemuva kokwenziwa kotshalomali.
Futhi ngemuva kokuphothulwa kokwakhiwa, kuzokwazi ukuhlala eMONTIS MOUNTAIN RESORT nguSplendid inyanga engu-1 ngonyaka, futhi lokhu kude nebhonasi kuphela yomtshali-zimali kule phrojekthi.
Ukuthenga igumbi (indawo) ehhotela I-MONTIS MOUNTAIN RESORT ngo-Splendid ngemali engama- € 250 noma ngaphezulu inika ithuba lokufaka isicelo sokuba yisakhamuzi saseMontenegro (+ izindleko ezingeziwe) kumtshali-zimali, kumkakhe nasezinganeni ezincike kwezezimali.
Umtshalizimali akafaki imali kusabelo, kepha usempahla eMONTIS MOUNTAIN RESORT nguSplendid, ethenga igumbi (suite) elithile.
Umthuthukisi uzibophezela ukukhokhela umtshalizimali u-40% wenzuzo ephelele kusuka egumbini ngonyaka
Intengo yegumbi ifaka nokufaka, izophothulwa ngesisekelo sohlelo olujwayelekile, ngokususelwa ekwakhiweni kwangaphakathi okuthuthukisiwe
Azikho izimali zokulondolozwa kwezezakhiwo, ngokungafani namanye amaphrojekthi anikezela nokuthengwa
Kuze kuphothulwe iphrojekthi ngo-2024, umtshali-zimali angaphila isonto eli-1 ngonyaka ehhotela le-SPLENDID (eningizimu yeMontenegro).
Ngemuva kokuphothula - inyanga engu-1 ngonyaka eMONTIS MOUNTAIN RESORT nguSplendid.
Ngokwemigomo yesivumelwano, kuzothengiswa igumbi (suite) eminyakeni emi-5.
Noma gcina utshalomali bese uqhubeka nokuthola iphesenti yenzuzo yehhotela.
IKolasin iyindawo encane yokuvakasha etholakala kumakhilomitha angama-73 enyakatho yedolobha lasePodgorica osebeni lwesobunxele loMfula iTara endaweni ephakeme ngamamitha angama-960 ngaphezu kolwandle. Izungezwe izintaba ezintathu - iSinyavina, Komovy, Belasitsa.